Aiza no tsara kokoa ny mividy backlinks amin'ny 2017?
Ny mpizaka tranonkala dia matetika manontany tena hoe aiza no hividianana rindran-damina amin'ny SEO. Mazava ho azy, te-hahazo ny kalitao sy ny rohy ekena ivelany izy ireo izay afaka mitondra any amin'ny ezaka SEO azy ireo ary hanatsara ny fikajiana ny habaka amin'izao fotoana izao. Asa sarotra ny mahazo rohy tsara amin'ny vidiny mety amin'ny androntsika. Ny orinasam-pampandrosoana goavana indrindra manolotra asa fiverenana an-tserasera dia sarotra. Ary ny andininy vice raha toa ny orinasa iray dia ambany ny taham-pahafahan'izy ireo manome tolotra tsaratsara kely izay tsy hitondra soa ho anao.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny sasany amin'ireo mpandraharaha mpanome tolotra tsara indrindra. Hanazava aminao aho hoe ahoana no ahafahanao mandray soa avy amin'io asa io na ny zavatra hafa azonao atao mba hahazoana raki-tsarimihetsika tsara indrindra.
Aiza ny mividy backlinks amin'izao andro izao?
Amin'ity fizarana ity, dia hanome anao fanamarinana vitsivitsy aho momba ireo mpanome tolotra fanamafisana tsara indrindra izay misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy amin'izy ireo no ao amin'ny filaminana manokana, ary manome azy ireo fahafahana tsara ho an'ny orinasa an-tserasera.
Ity fitaovana ity dia noforonina manokana ho an'ireo izay te hampitombo ny varotra an-tserasera, nefa mbola tsy mahazatra azy amin'ny teknika fanadiovana fikarohana sy tsy te hampiasa vola be loatra nefa tsy mahita vokatra manokana. Semalt Auto SEO fitaovana dia manamboatra tranonkala fanatsarana, mahatonga ny pejy web bebe kokoa amin'ny fikarohana maotera ary manala ny fahadisoana ara-teknika rehetra misy.Ankoatra izany, manatsara ny endriky ny tranokalan'ny SERP amin'ny alalan'ny fametrahana ny voka-pifidianana. Antony iray hafa ampiasana ny Semalt Auto SEO dia ny mamorona fanentanana fananganana rohy matanjaka, manangana hatrany ny rindranasa vaovao sy manan-danja izay manondro ny tranokalanao.
Ny volana voalohany fitsaboana ny saram-pananany dia lany 0,99 cents fotsiny. Fotoana ampy hahafantarana raha mendrika ny sainao ny asa fanorenana rohy na tsia.
Ny Semalt dia manana vohikala vohikalan'ny vohikala amin'ny ankamaroan'ny sehatra an-tserasera. Ny tranokalan'ny Semalta dia manana tranonkala miisa 50, 000 azo itokisana amin'ny sehatra samihafa. Izany no mahatonga anao ho azonao antoka fa hahazo lohamilina avy amin'ny loharanom-pahefana ianao. Ny rohy rehetra ao amin'ny tranonkalanao dia ho tafiditra ao anaty votoaty miavaka, hitondra anao ny vokatra fanatsarana tanteraka. Miaraka amin'ny mpikirakira web mpikaroka, dia afaka manara-maso ny rohy sy ny toerana misy azy ianao. Ny fanorenana ny rohy dia tanterahina tsikelikely araka ny isa 40%, 50% - rohy fanamoriana ary rohy ny anaran'ny 10%. Ireo rohy rehetra ireo dia tsy maharitra, fa izy ireo dia napetraka nandritra ny fotoana nanaovanao ny Semalt.
Ity orinasa ity no mpamatsy tsara indrindra amin'ny asa fanompoana amin'ny tranokalan'ny PBN. Ny tompon'ity orinasa Matt Diggity ity dia manam-pahaizana momba ny SEO ambony sy mpandraharaha mahomby izay manana tamba-tserasera miisa 5.000. Ny orinasan-tserasera Diggity Link dia manome karazana fivarotana isam-bolana manomboka amin'ny vidin'ny $ 5 isaky ny rohy. Mety ho sarotra ny miditra amin'ity rafitra ity. Izy io dia tambajotram-pampiharana iray natokana hanomezana hery, kalitao ary fiarovana an-tserasera rehefa manome ny vidiny mahasarika indrindra. Alohan'ny hanampiana ireo sehatra vaovao amin'ny rafitra, ny orinasa Diggity Links dia mametraka tranokala momba ny kalitao sy ny lanjany. Mampiasa tranokala izay mbola tsy nampiasaina ho an'ny SEO izy ireo ary mbola tsy voasazy. Ny tranonkala rehetra dia notsorina mba hampitomboana ny fitomboana eo amin'ny habaka amin'ny tranonkala fahatelo Source .